REKOODH: Liverpool Oo Rekoodh Dunida Oo Dhan Ah Ku Garaacday Man City & Magacyada Labada Xiddig Ee Ka Caawiyay - Gool24.Net
REKOODH: Liverpool Oo Rekoodh Dunida Oo Dhan Ah Ku Garaacday Man City & Magacyada Labada Xiddig Ee Ka Caawiyay
Kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa Manchester City oo ay England ku xifaaltamaan kaga sarre martay rekoodhka caalamiga ah ee kooxda ugu qaalisan guud ahaan kubadda cagta xilli ay kooxda Pep Guardiola hore u haysatay.
Labada ciyaaryahan ee ka caawiyay inay kooxda Jurgen Klopp ka sarre marto Sky Blues ayaa ah saxeexyadooda cusub ee Thiago Alcantara oo Bayern Munich kaga yimid iyo Diogo Jota oo dhinaca Wolverhampton kaga soo biiray.
Kooxda deegaanka ku ah gobolka Merseyside ayaa lasoo saxeexatay labada ciyaaryahan si ay kor ugu qaado rajadeeda difaacashada horyaalka kaddib markii ay si raaxo leh u hanteen xilli ciyaareedkii hore.
Sida lagu sheegay xogtii ugu dambaysay ee laga helay shabakadda arrimaha suuqa ku xeel dheer ee Transfermarkt, Reds ayaa ka qaalisan wakhtigan Manchester City kaddib suuqii xagaaga.
Transfermarkt ayaa sheegaya in kaddib imaatinka Jota iyo Alcantara ay Liverpool ku qiimaysan tahay lacag 981.08 Milyan Pound ah oo ay 20 Milyan oo Pound ka qiimo badan yihiin safka uu Guardiola ku haysto Etihad Stadium.
Qaab ciyaareedkii guusha weyn uga keenay gudaha England xilli ciyaareedkii hore Liverpool ee ay qaab rekoodh ah horyaalka ugu guuleysteen iyadoo toddoba kulan hadhsan yihiin ayaa sharraxaysa sababta ay sidaas ugu qiime-bateen xiddigaheedu.
Daafaca bidix ee kooxda ahna kabtanka xulka Scotland ayaa ah mid kamida xiddigaha inta u badan qiime kordhay iyadoo ay 10 Milyan oo Pound ku biireen intii uu hore Transfermarkt ugu qiimaysnaa halka goolhaye Alisson Becker ay 9 Milyan oo Pound ku kordheen.
Dhinaca kale Man City ayaa lasoo saxeexatay suuqii dhawaan Ruben Dias, Nathan Ake iyo Ferran Torres balse dhammaantood ayaan ugu filnaanin inay rekoodhkoodii kooxda dunida ugu safka qaalisan ka ceshadaan Liverpool.